စတီဗင်ဂျရတ် သည် အင်္ဂလန်ဘောလုံးအားကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ၎င်းကို ၁၉၈၀ မေ ၃၀ တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။ သူသည် အင်္ဂလန် ပရီးမီးယားလိဂ် လီဗာပူးဘောလုံးအသင်း၏ အသင်းခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပြီး အင်္ကျီနံပါတ် ၈ ကိုဝတ်ဆင်ကစားနေသည်။ စတီဗင်ဂျရတ်သည် အင်္ဂလန် နိုင်ငံလက်ရွ ...
ဂျက်ကလင် မားဇ် သည် ဖောရက်စ် မာ့ဇ် ၏သမီးဖြစ်ပြီး Mars အမည်ရှိ အမေရိကန်သကြားကုမ္ပဏီ ကို စတင်တည်ထောင်ခဲ့သူ Frank C. Mars ၏မြေးဖြစ်သည်။ သူမပိုင်ကုမ္ပဏီရှယ်ယာများသည် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၁ ဘီလီယံမျှရှိသည်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ် မတ်လတွင် သူမသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ၅၉ ယောက် ...
ဂျက်ကီချန်း ချန်လုံသည် ဟောင်ကောင် စတန့်မင်းသား၊ ဒါရိုက်တာ၊ ထုတ်လုပ်သူ၊ ဇာတ်ညွှန်းရေးဆရာ၊ တေးသံရှင်လည်းဖြစ်သလိုရုပ်ရှင်မင်းသား တစ်ဦးဖြစ်သည်။ ချန်းအား ဗြိတိသျှ ကိုလိုနီပိုင်နယ်ဖြစ်သော ဟောင်ကောင်၊ ဝိတိုရိယတောင်တွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ ၁၉၅၄-ခု၊ ဧပြီလ ရက် ...
Jeton Kelmendi သည်ပညာရေး၊ အယ်လ်ဘေးနီးယားသတင်းစာဆရာ၊ ကဗျာဆရာ၊ ဘာသာပြန်၊ တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခနှင့်နိုင်ငံရေးလေ့လာသုံးသပ်သူဖြစ်သည်။ Jeton Kelmendi သည်သူ၏မူလတန်းကျောင်းကိုသူ၏မွေးရပ်မြေတွင်ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် Pristina တက္ကသိုလ်၌ဆက်လက်ပ ...
ဂျက်ဒေါ်ဆေး သည် အမေရိကန်လူမျိုး ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်မာနှင့် အင်တာနက်လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦး ဖြစ်သည်။ တွစ်တာကို တည်ထောင်သူနှင့် အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် မိုဘိုင်းငွေပေးချေမှုကုမ္ပဏီတစ်ခု ဖြစ်သည့် Square ကို တည်ထောင်သူနှင့် အမှုဆောင်အရာရှိချုပ ...
ဂျက်နက်ဂျက်ဆင်သည် ကမ္ဘာ့ပေါ့ဘုရင်ဟောင်း မိုက်ကယ်လ် ဂျက်ဆင် ၏ ညီမဖြစ်ပြီး R&amp;B, pop, rock အဆိုတော်တစ်ဦး ဖြစ်သည်။ ဂျက်နက်ဂျက်ဆင်သည် အဆိုတော်ဖြစ်ရုံသာမက သီချင်းများကိုလည်း ကိုယ်တိုင်ရေးသားသည်။ အမေရိကန် သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးလည်း ဖြစ်သည်။ ၁၉၆၆-ခုနှစ်၊ မေ ...
ဂျက်နက်မာရီဝင်း သည် ကိုလံဘီယာတက္ကသိုလ်ရှိ Data Sciences Institute တွင် Avanessians Director ဖြစ်သည့်အပြင် ကွန်ပျူတာသိပ္ပံဌာန၏ ပါမောက္ခလည်းဖြစ်သည်။ ၂၀၁၇ ဇွန် ၃၀ ရက်နေ့အထိ မိုက်ခရိုဆော့သုတေသနချိတ်ဆက် နှင့် တစ်ကမ္ဘာလုံးရှိ အဓိကသုတေသနဓာတ်ခွဲခန်များကိ ...
ဝယ်လင်တန်အထက်တန်းကျောင်း၊ ဘရာဆင်နော့စ်ကောလိပ် နှင့် အောက်ဖို့တက္ကသိုလ်တို့တွင် ပညာသင်ကြားခဲ့သည်။ စာရေးဆရာဖြစ်မလာမီ နိုင်ငံတကာ အားကစားသမားတစ်ဦး ဖြစ်သည်။ ၁၉၆၃ − ၁၉၆၆ ခုနှစ်များတွင် အင်္ဂလန်နိုင်ငံကို ကိုယ်စားပြု၍ မီတာ ၁၀၀ အပြေးပြိုင်ပွဲ၌ ဝင်ရောက်ယှ ...
Amazon.com. ဝက်ဆိုဒ် ကုမ္ပဏီကြီး၏ တည်ထောင်သူဖြစ်သော ဥက္ကဋ္ဌ ၊ စီအီးအို နှင့် သဘာပတိဖြစ်သူ ဂျက်ဖ်ရီ ပရက်စတန် ဂျက်ဖ် ဘေးဇို့စ် ကို ၁၉၆၄ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၁၂ ရက်နေ့တွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ ပရင်စတန် တက္ကသိုလ် ၏ Tau Beta Pi ဘွဲ့ရ ဘေးဇို့စ် သည် Amazon ကို မတ ...
ဂျက်မား သို့ မားယွန် သည် တရုတ်စီးပွားရေးသမား သူဌေးတစ်ဦး ဖြစ်ပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူနှင့် ပရဟိတသမားတစ်ဦးလည်း ဖြစ်သည်။ သူသည် နိုင်ငံတကာ နည်းပညာ ကုမ္ပဏီအစုအဖွဲ့တစ်ခု ဖြစ်သော အလီဘာဘာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစု ကို ပူးတွဲတည်ထောင်ခဲ့သူနှင့် ယခင် အမှုဆောင် ဥ ...
Li Lianjie ၊ သူ၏အနုပညာအမည် ဂျက်လီ ဟု လူသိများသည်။ ဘေဂျင်းတွင် မွေးဖွားသော တရုတ်ရုပ်ရှင်မင်းသား၊ ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူ၊ သိုင်းပညာရှင်နှင့် ဝူရှူးချန်ပီယံဟောင်းတစ်ဦး ဖြစ်သည်။ သူသည် စင်ကာပူနိုင်ငံသားပြုခွင့်ရသူတစ်ဦး ဖြစ်သည်။ ထင်ရှားသော ဝူရှူးဆရာဝူဘင်ဖြ ...
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု၏ ၃၉ ယောက်မြောက် သမ္မတအဖြစ် တင်မြှောက်ခံရသူ ဂျင်မီကာတာသည် မြေပဲခင်းများ၊ ထင်းရူးတောများနှင့် လယ်ကူလီလူမည်းများ အလယ်တွင် ကြီးပြင်းလာခဲ့သော ကျေးတောသားတစ်ဦး ဖြစ်သည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု တောင်ဘက်စွန်းရှိ ဂျော်ဂျီယာ ပြည်နယ်၊ ပလိန်း ...
ဟန်နွေငြိမ်း ဂျင်းနီ သည် အဆိုတော်တစ်ဦးနှင့် အလှမယ်တစ်ဦး ဖြစ်သည်။ ဂျင်းနီကို ၁၉၈၇ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့တွင် မွေးဖွားခဲ့ပြီး တစ်ဦးတည်းသော သမီးဖြစ်သည်။ ငယ်စဉ်ကတည်းက မြန်မာအကကို ဝါသနာပါခဲ့သည်။ မူကြိုကျောင်းမှစတင် ကခဲ့ပြီး ဆုများရရှိခဲ့သည်။ ၃တန်းရ ...
ဂျနီဖာ လင်း လိုပက်ဇ် သည် အမေရိကန် ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်၊ စာရေးဆရာ၊ ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းနာ၊ ထုတ်လုပ်သူ နှင့် အဆိုတော် တစ်ယောက် ဖြစ်သည်။ သူမသည် ၁၉၈၆ ခုနှစ်ထုတ်ဝေသော ရုပ်ရှင် ဖြစ်သည့် မိုင် လစ်တဲလ် ဂဲလ် တွင် မထင်ရှားသော အခန်းမှ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ပြီးနောက် ဖျော ...
ဒေါ်ဂျနီဖာတင်လေး သည် မြန်မာ့အားကစားသမားဟောင်းတစ်ဦးဖြစ်ကာ အရှေ့တောင်အာရှ အားကစားပြိုင်ပွဲတစ်လျှောက် အအောင်မြင်ဆုံး အားကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်သည်။ နိုင်ငံရေးအခြေအနေအရ အားကစားလောကတွင် ပံ့ပိုးမှုနည်းပါးနေချိန်တွင် ရွှေတံဆိပ်ဆုပေါင်းများစွာ ရယူနိုင်ခဲ့သော အ ...
ဂျန်နာရာ သည် တောင်ကိုရီးယားအဆိုတော်နှင့် သရုပ်ဆောင်ဖြစ်ပြီး တောင်ကိုရီးယားနှင့် တရုတ်အနုပညာလောက၌ ထင်ရှားသည်။ သူ့သီချင်း အိပ်မက်လှလှ ကြောင့် လူသိများသည်။ New Nonstop, Successful Story ofaBright Girl, Bratty Princess, Baby Faced Beauty, School 20 ...
ဂျောင်အီဝူး သည် တောင်ကိုရီးယားသရုပ်ဆောင်တဦး ဖြစ်ကာ၊ တန့်မရတဲ့အမြင့်ကန်ချက် ၊ ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲများဖြစ်သော အီဂျိမဲ ပြန်လာခြင်း ၊ ၄၉ရက် ၊ ညစောင့်ရဲ့နေ့စဉ်မှတ်တမ်း နှင့် စင်ဒရဲလားနှင့်သူရဲကောင်းလေးဦး တို့၌ ထင်ရှားသည်။
ဂျပ်စတင် ရန်ဒေါလ် တင်ဘာလိတ်ခ် သည် အမေရိကန် ခေတ်ပေါ် တေးသံရှင်နှင့် သရုပ်ဆောင် တစ်ဦးဖြစ်သည်။ ဂီတလောကတွင် အရေးအကြီးဆုံး ဂရမ်မီဆု ၆ ဆုနှင့် အမေရိကန် ရုပ်မြင်သံကြားလောက၏ အဓိကဆုကြီးဖြစ်သည့် အမ်မီဆု ၂ ဆုကို ရရှိခဲ့ဖူးသူဖြစ်သည်။ Star Search အမည်ရှိ အဆို ...
ဂျပ်စတင် ဒရူး ဘီဘာ သည် ကနေဒါနိုင်ငံသား ခေတ်ပေါ် pop နှင့် R&amp;B တေးသံရှင်ဖြစ်သည်။ ဘီဘာ၏ ယူကျု ပေါ်ရှိ ဗွီဒီယိုအား ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် စကူတာ ဘရောင်း က တွေ့ရှိခဲ့ပြီး နောက်တွင် ဘီဘာ၏ မန်နေဂျာ ဖြစ်လာသည်။ ဘရောင်းက ဘီဘာအား နာမည်ကျော် တေးသံရှင် အပ်ရှာ နှ ...
ဂျယ်ရီ ယန်း သည် အင်တာနက် ရှာဖွေရေးကုမ္ပဏီ Yahoo! အား ပူးတွဲ တည်ထောင်သူ၊ ယင်းကုမ္ပဏီ၏ အမှုဆောင် အရာရှိချုပ်ဟောင်းနှင့် Yahoo! ၏ အကြီးအကဲအဖြစ် ရပ်တည်နေသူဖြစ်သည်။
ဂျရတ် ဝတ်သ်ဟိုင်းမား သည် ပြည်သစ်ပြည်အခြေစိုက် House of Chanel ရေမွှေးကုမ္ပဏီကို သူ့၏ညီ အလန် ဝတ်သ်ဟိုင်းမား နှင့်အတူ ပိုင်ဆိုင်လုပ်ကိုင်နေသာ ပြင်သစ်လူမျိုး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးဖြစ်သည်။Jacques Wertheimer နှင့် Eliane Fischer တို့၏ သားဖြစ်ပြီ ...
Westminister ၏ ၆ ယောက်မြောက် မြို့စားကြီး Major-General Gerald Cavendish Grosvenor သည် ၁၉၅၁ ဒီဇင်ဘာ ၂၂ နေ့တွင်မွေးဖွားခဲ့သူ ဖြစ်ပြီး Westminister ၏ ၅ ယောက်မြောက် မြို့စား ဖြစ်သူ Robert George Grosvenor နှင့် သူ၏ ဇနီး Hon တို့၏သားဖြစ်သည်။ အိမ်ယာမြ ...
ဂျာမန် ဘောရစ်ဆိုဗစ်ချ် ခန်းကို ရုရှားနိုင်ငံ Kiev တွင် ၁၉၆၂ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၂၆ တွင် မွေးဖွားခဲ့ပြီး ဆီနှင့်ဓာတ်ငွေ့ လုပ်ငန်းများတွင်စိတ်ဝင်စားမှုရှိသော ရုရှားလူမျိုး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးဖြစ်သည်။ သူသည် မော်စကို စတီးလ်နှင့်အလွိုင်းသိပ္ပံ ...
ဂျိမ်းစ် ဟာရစ် "ဂျင်မ်" ဆီမွန် ကို ၁၉၃၈ ခုနှစ်တွင် မွေးဖွားခဲ့ပြီး အမေရိကန်လူမျိုး သင်္ချာ ထူးချွန်သူ ပညာရှင်၊ ကုန်သည်နှင့် လူမှုရေးထူးချွန်သူဖြစ်သည်။ ၁၉၈၂ တွင် သူသည် ၁၅ ဘီလျံဒေါ်လာ ရင်းနှီးစီမံမှုဖြင့် Renaissance Technologies ဟု ခေါ်သော လျှို့ဝ ...
ဂျိုကို ဝီဒိုဒို သည် နိုင်ငံရေးသမားတစ်ဦးဖြစ်ကာ အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတနိုင်ငံ၏ သတ္တမမြောက်နှင့် လက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော သမ္မတဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဇူလိုင်လအတွင်းက သမ္မတအဖြစ် ရွေးကောက်ခံခဲ့ရပြီး အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတများတွင် နိုင်ငံရေး အထက်တန်းလွှာမိသားစ ...
နိုဗက်ဂျိုကိုဗစ် သည် ဆားဘီးယားနိုင်ငံ၏ နံပါတ် ၁ တင်းနစ်ကစားသမားဖြစ်၍ ကမ္ဘာနံပါတ် ၂ တင်းနစ်ကစားသမားဖြစ်သည်။ ဂျိုကိုဗစ်ဟာ ဩစတေးလျအိုးပင်း၊ ဝင်ဘယ်လ်ဒမ် ချန်ပီယံရှစ်၊ အမေရိကန်အိုးပင်း စတဲ့ Title ၅ ခုကိုရရှိထားသူဖြစ်တယ်။ ၂၀၁၁ ရဲ့အဓိက ပွဲစဉ် ၃ ခုကို အန ...
၁၉၅၇ ခုနှစ်တွင် မန္တလေးတိုင်း အမရပူရ မြို့၌ အဖ ဦးမြမောင်၊ အမိ ဒေါ်မြခင် တို့မှ မွေးဖွား ခဲ့သည်။ အမည်ရင်း စိုးဝင်း၊ ငယ်စဉ်က အမရပူရမြို့ အစိုးရ အထက်တန်း ကျောင်းတွင် မူလတန်းမှ တက္ကသိုလ် ဝင်တန်း အထိ ပညာ သင်ကြား ခဲ့သည်။ ၁၉၈၃ ခုနှစ်တွင် မန္တလေး ဆေး တက္ ...
ဂျိုနသန် ရက်ဂတ် သည်တရုတ် - အင်္ဂလိပ်သရုပ်ဆောင်ဖြစ်သည်။ သူပါဝင် သရုပ်ဆောင်ထားသည့် ထင်ရှားသော ရုပ်ရှင်နှစ်ခုမှာ ဝေါလ်ဖ်ဘလက်ဒ်နှင့် သည်လေဒီ တို့ဖြစ်သည်။။
ဂျိုဝယ်လ် အဒမ်စ် သည် ဩစတြေးလျ pop/soul အဆိုတော်၊ တေးရေးဆရာ တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ထွက်ရှိခဲ့သော Please Dont Go သီချင်းဖြင့် ကျော်ကြားသည်။ ၅ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၈ တွင် ၎င်း၏ single တစ်ပုဒ်ဖြစ်သည့် Fake Friends ထွက်ရှိခဲ့သည်။
ဂျိုးဇက် ရော်ဘင်နက် ဘိုင်ဒင် ဂျူနီယာ သည် အမေရိကန် နိုင်ငံရေးသမားတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ၄၆ ယောက်မြောက်နှင့် လက်ရှိအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ သမ္မတ ဖြစ်သည်။ ယခင်သမ္မတဖြစ်သူ ဒေါ်နယ်လ် ထရန့် အား အနိုင်ရရှိပြီးခဲ့သည်။ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဝင် တစ်ဦး ဖြစ်သော ဂျိုးဘိုင်ဒင်သ ...
ဂျိုးဇက် ဆဖရာ သည် Safra Group အမည်ဖြင့် ဘရာဇီးဘဏ်နှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်း အင်ပါယာ တို့ကို လက်ရှိတွင် ချဲ့ထွင် လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည်။ Safra ကုမ္ပဏီအားလုံးထဲမှ ဘရာဇီးနိုင်ငံ ဆော်ပေါ်လို ရှိ Banco Safra ရုံးချုပ်နှင့် Safra အမျိုးသားဘဏ်၏ ဥက္က ...
ဂျီချန်ဝု သည် တောင်ကိုရီးယားသရုပ်ဆောင်တဦး ဖြစ်သည်။ ထပ်ပြုံး ဇာတ်လမ်းတွဲ၌ ဒုန်းဟယ် အဓိကဇာတ်ရုပ်ဖြင့် စတင်ထင်ရှားလာပြီးနောက်၊ စစ်သည်တော်ဘက်ဒုန်းဆူ ၊ ဘုရင်မကြီးကီ ၊ ဟီးလား ၊ ကေတူး နှင့် မှုခင်းအက်ရှင်ဖြစ်သော လံကြုပ်မြို့ တို့၌ ပါဝင်လာသည်။
မူလတန်းတွင် ဂျူဒိုအားကစားသမားဖြစ်သော ဂျီဆူသည် ပြည်တွင်းပြိုင်ပွဲများ၌ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သည်။၂၀၁၂ တွင် ဂျေဝိုင်ပီ အင်တာတိန်းမင့်၌ သရုပ်ဆောင်လက်သစ် အဖြစ်ပါသည်။ ဒီဂျစ်တယ် ဆိုးလ်ယဉ်ကျေးမှုအနုပညာတက္ကသိုလ်သို့ တက်ရောက်ကာ၊ ရုပ်ရှင်ဘာသာရပ်ကို အထူးပြုယ ...
ဂျီဆူး (အဆိုတော်၊ ၁၉၉၅ မွေးဖွား)
ကင်မ် ဂျီဆူး သည် တောင်ကိုရီးယား အဆိုတော်၊ သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး အတိုကောက်အနေဖြင့် ဂျီဆူး ဟုပို၍ လူသိများသည်။ သူမ၏ အနုပညာခရီးကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လတွင် YG Entertainment လက်အောက်ရှိ Blackpink မိန်းကလေးအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် စတင်ခဲ့သည်။
ဂျီယိုဂျီ ကိုနူဆီ "ဂျော့" ကောနရောတေ, အိုအက်ဖှ်, အမ်စီ သည် ခုနှစ်ဖွားသူ တစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ ဖီဂျီ နိုင်ငံရေးသမား၊အငြိမ်းစား ဗိုလ်မှူးချုပ် ဖြစ်ပြီး ဖီဂျီစစ်ဘက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ထိုသူကို ဖီဂျီသမ္မတအဖြစ် ၂၀၁၅ခုနှစ်ကတည်း က ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ လက ...
ဂျီရာယု လ-အုန်မဏီ သည် ထိုင်းသရုပ်ဆောင် တစ်ဦးဖြစ်ပြီး Kao ဟု ချစ်စနိုးဖြင့် ခေါ်ကြသည်။ သူသည် ထိုင်းလူမှုဘဝသရုပ်ဖော် ဇာတ်လမ်းတွဲများစွာနှင့် ရုပ်ရှင်များတွင် သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ကြော်ငြာများတွင် သရုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့် မော်ဒယ်အလုပ်ကိုလည်း လုပ်ကိုင်လျက်ရ ...
ဂျူလီယန် အက်စ်ဆန်း သည် ကွန်ပျူတာ ပရိုဂရမ်မာနှင့် အစိုးရများ၏ ကန့်သတ် သတင်းအချက်အလက်များကို ပေါက်ကြား ဖော်ထုတ်သည့် ဝက်ဘ်ဆိုက် ဝီကီလိခ်ကို တည်ထောင်သူ ဖြစ်သည်။ ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် ဝီကီလိခ်ကို စတင်တည်ထောင်ခဲ့သော်လည်း ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် ဘတ်ဂဒတ်မြို့ လေကြောင် ...
ဂျူလီယာ အီလင်း ဂေးလတ် သည် ဩစတြေးလျနိုင်ငံ ၏ ၂၇ ယောက်မြောက်နှင့် လက်ရှိ ဝန်ကြီးချုပ် ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ် ဇွန်လ မှစ၍ ဝန်ကြီးချုပ် ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဂေးလတ်သည် သူမ၏ မိသားစုနှင့် အတူ ဩစတြေးလျနိုင်ငံ အက်ဒလိတ်မြို့သို့ ၁၉၆၆ ခုနှစ်တွင် ရွေ့ပြောင်းလာခဲ့ပြီး ...
ဆရာမဂျူးကို ရေနံချောင်းမြို့၌ ၁၉၅၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၂၀ ရက် စနေနေ့တွင် အဘ ဦးသောင်းနှင့် အမိ ဒေါ်ငြိမ်းတို့မှ မွေးဖွားသည်။ အမည်ရင်းမှာ တင်⁠တင်ဝင်း ဖြစ်သည်။ မွေးချင်း ၅ယောက်အနက် တတိယမြောက်ဖြစ်သည်။ ရေနံချောင်းမြို့တွင် သူငယ်တန်း၊ ကုန်းဇောင်းရွာတွင် သ ...
ဂျွမ်း ရိုးလင်း CH, OBE, HonFRSE, FRCPE, FRSL ၊ ဂျေ ကေ ရိုးလင်း ဆိုသော ကလောင်အမည်ဖြင့် ပိုမိုထင်ရှား) သည် ဗြိတိသျှလူမျိုး ဝတ္ထုရေးဆရာမ၊ ဇာတ်ညွှန်းရေးဆရာမနှင့် ထုတ်လုပ်သူတစ်ဦး ဖြစ်၍၊ ဟယ်ရီပေါ်တာ ဆန်းကြယ်စိတ်ကူးယဉ် ဝတ္ထုရှည် စာအုပ်အတွဲ ရေးသားခြင်းအ ...
ဂျေဂျေလင်း သည် စင်္ကာပူလူမျိုး အဆိုတော်၊ သီချင်းရေးဆရာ၊ ဓာတ်ပြားထုတ်လုပ်သူနှင့် သရုပ်ဆောင် ဖြစ်သည်။ သူ၏ ဂီတဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုသည် ၂၀၀၃ ခုနှစ် ဂီတခရီးလမ်း ဟူသော အယ်လဘမ်ဖြင့် ပွဲဦးထွက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ လင်းသည် အကောင်းဆုံး မျက်နှာသစ်အနုပညာရ ...
ဂျေမီ သည် မြန်မာ ဟစ်ဟော့အဆိုရှင် ဖြစ်သည်။ ၂၀၀၀ ပြည့်ဝန်းကျင်တွင် ဂီတခရီးစခဲ့ပြီး မြန်မာ့ မြေအောက်ဟစ်ဟော့လောက၏ ဥသျှောင်တစ်ယောက်အဖြစ် သတ်မှတ်ကြသည်။
ဂျောင်ဟယ်အင်း သည် တောင်ကိုရီးယားသရုပ်ဆောင် တစ်ဦး ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၃ တွင် AOA Black ၏ တေးဗွီဒီယိုတွင် ပထမဦးဆုံး ပွဲဦးထွက်ခဲ့ပြီး နောက်တစ်နှစ်တွင် ရာစုနှစ်သတို့သမီး ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲဖြင့် တရားဝင် ပွဲဦးထွက်လာခဲ့သည်။ ၂၀၁၇ ရုပ်သံများ ဖြစ်သော မင်းတို့အိပ်ပျ ...
၁၉၄၂ တွင်မွေးဖွားခဲ့သူ ဂျော့ချ် ဘီ ခိုင်ဆာ သည် အမေရိကန်စီးပွားရေးသမားတစ်ဦးဖြစ်ပြီး BOK ဘဏ္ဍာရေး အဖွဲ့အစည်းကြီး၏ ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သည်။ သူသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင်အချမ်းသာဆုံးလူ အယောက်ငါးဆယ်ထဲမှ တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး အမေရိကန်ရှိ အလှူရှင်များထဲတွင် ပါဝင်သည်။
ဂျော့ချ် ပေါ်လို လေးမန်း သည် ၂၀၁ဝ တွင် ချမ်းသာ ကြွယ်ဝမှု ခန့်မှန်းခြေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၁၅ ဘီလျံ ရှိပြီး၊ ဘရာဇီးနိုင်ငံ၏ တတိယ အချမ်းသာဆုံးသူ ဖြစ်သည်။ ၁၉၃၉ တွင် ဂျော့ချ် ပေါ်လိုလေးမန်း အား ဘရာဇီးလ် နိုင်ငံသို့ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်နေကြသော ဆွဇ် လူမျိုး ...
ဂျော့ရှ်ဝေါ်လ်ကာ ဘုရှ် သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ ၄၃ ယောက်မြောက်သမ္မတဖြစ်ပြီး ၂၀၀၁ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၉ ခုနှစ် အထိ သမ္မတအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ထိုရာထူး မတိုင်မီက သူသည် တက်ကဆပ်ပြည်နယ်၏ ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖြစ် ၁၉၉၅ မှ ၂၀၀၀ ခုနှစ် အထိ တာဝန်ထမ်းဆောင ...
ဂျော်ဂျင်ဟို ဟုလူသိများသော ယော့ဂျ် လူးဝစ် ဖရီလို ဖေဟို ဘရာဇီးလ်ဖွား အီတလီပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘောလုံးသမား ဖြစ်သည်။ ပရီးမီးယားလိဂ် ကလပ် ချဲလ်ဆီးနှင့်အီတလီအမျိုးသားအသင်းတို့တွင် ကွင်းလယ်ကစားသမားအဖြစ် ကစားသည်။ သူသည် လက်ရှိချဲလ်ဆီး၏ဒု - ကပ္ပတိန် ဖြစ်သည်။ ဂ ...
ဂျိုနီရှီကဲ့,သည် ဂျပန်နိုင်ငံသူ ဂျပန်လူမျိုး NMB48အဖွဲ့မှ ဂျပန်တကိုယ်တော် အဆိုတော် တစ်ဦး ဖြစ်သည်။ ဂျော်နီရှီးကဲ့ကို မတ်လလ ၁၈ရက်နေ့ ၁၉၉၅ ခုနှစ်တွင် 滋賀県ရှိဂါ့စီရင်စု၌ မွေးဖွားခဲ့သည်။ ဂျပန်အိုင်​ဒေါ အမျိုးသမီးအဖွဲ့ မှ NMB48၏ အဖွဲ့ဝင်ဟောင်း တစ်ဦး ...
ဂျော်နီရှီးဒဲ့,သည် ဂျပန်အိုင်ဒေါအမျိုးသမီးသီးသန့်အုပ်စုမှ NMB48အဖွဲ့ဝင်အဆိုတော်တစ်ဦး ဖြစ်သည်။ ဂျော်နီရှီးဒဲ့သည် ဂျပန်နိုင်ငံသား ရှင်းတိုးဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မွန်ကိုးရီးယားလူမျိုးဖြစ်ပြီး မွေးချင်း​၄ယောက်အနက် တကိုယ်တော်အဆိုတော် ဂျော်နီရှီးကဲ့၏ အငယ်ဆုံးညီ ...
မန်းဂျော်နီ သည် မြန်မာနိုင်ငံသား ကရင်လူမျိုး နိုင်ငံရေးသမားနှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်း တစ်ဦးဖြစ်ပြီး လက်ရှိတွင် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်တွင် ကျုံပျော်မြို့နယ် ကိုယ်စားပြု လွှတ်တော်အမတ်အဖြစ် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ ၁၉၉၀ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲတ ...
ဂျေးမီ ကမ့်ဘဲလ် ဘောင်ဝါ
စင်မျူရယ် ရော့ဘ်ဆင် ဝေါ်လ်တန်